Brentch Mbolamasoandro - Lanonana faha 20 taona nanoratana
08 jolay 2019
Lanonana faha 20 taona nanoratana
Tontosa tao amin'ny Tranombokim-pirenena Anosy, efitrano Dox, tamin'ny 4 jolay 2019 teo ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny faha 20 taona nanoratan'i Brentch Mbolamasoandro pôeta, mpanoratra, mpanoratra tantara tsangana, mpiangano, mpanao hosodoko. Ity lanonana ity dia teo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Nifandimby nandaha-teny tamin'izany i Brentch Mbolamasoandro, ny solontenan'ny FAVI (Fédération des Arts VIsuels), ny Filoha am-boninahitry ny Havàtsa-Upem, ny Filohan'ny FMTS (Federasiona Mpikanto Teny sy Soratra) ary ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Rtoa Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO.
Nanatrika ny fotoana ny olo-manan-kaja samihafa avy ao amin'ny Fiadidian'ny Repoblika, ny Ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina nomban'ireo tale samihafa ao amin'ny ministera, ireo Mpikanto ao amin'ny FMTS...
Fanapahana koba, antsa sy hira
Niavaka ny fanapahana koba notanterahin-dRtoa Minisitra, Brentch Mbolamasoandro ary i Madera (Havàtsa-Upem) teo amin'ny latabatry ny fitsako sy ny fisotro.
Antsa sy ny hira samihafa no namaranana ny fotoana.
Tatitra : Tsikimilamina Rakotomavo